ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မ ဗြုတ်တွေထနေတဲ့ မမပါ - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မ ဗြုတ်တွေထနေတဲ့ မမပါ
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်မ ဗြုတ်တွေထနေတဲ့ မမပါ
Apann Pyay 10:47 AM ဗဟုသုတအစုံ Edit
တစ်ချိူ့တွေ မစာမနာ ဗြူတ်ထနေ တာ ဆိုပီ လက်ညိူးထိုးကဲ့ရဲ့ပြောနေတာ ရှင်တို့စိတ်ဓာတ်ကို ကျွန်မ လေးစား ပါတယိ
ရှငိတို့ မျက်နှာမှာ ဝက်ခြံ သို့ အဆီဖု တစ်လုံးပေါက်ရင် ရှင်တို့ စိတ်ပူကြတယ် ဖြစ်မှာဆိုးရိမ်တယ်မဟုတ် လား ?
ဘာကြောင့် makeup မတည့်လို ထွက်လာတဲ့ ကျွန်မ မျက်နှာက အဆီဖုတွေကို ဘာကြောင့် လှောင်ရယ် နေကြလဲ ကိုယ်ချင်စားကြည်ပါလား ကျွန်မမျက်နှာမဟုတ်ဘဲ ရှင်တို့ မျက်နှာ မှာဆို ရှင်တို့ ကိုဒီလို လှောင်ရယ် ရင် ဘယ်လိုတွေ ခံစားရမလဲ လို ကျွန်မ မိန်းကလေးထဲက မိန်းကလေး ပါ လှချင်တာပေါ့ အရင်ကဆို ဝက်ခြံ တစ်ဖု ထွက်လာရင် ဟာ ဝက်ခြံကြီးဆို အလှပျက် မှာ စိတ်ပူ ဂရု စိုက် လိုက်ရတာ
အခု ဒီလိုဖြစ်တော့ မှန်မြင် တိုင်း အသ်ိမိတ်ဆွေတွေက ဟယ် နင်မျကိနှာကြီး ဆိုပီ မေး လာတိုင်း ငိုခဲ့ရသူပါ
ပြောက်ချင်လှပါပီဆိုပီ အော်အော် ငိုဖူး တယ် .. မနက်နိုးလို မျက်နှာတန်းမသစ် ဘူး မျက်နှာက အဖုတွေ ပြောက်ပီလား ဆိုပီး မှန်ပြေးကြည့် ပီး စိတ်ဓာတ်ကျတယ် ယနေ့ထိဘဲ ဘာကြောင်စာနာ စိတိမထား ကြတာလဲ ??
ကျွန်မ အရင်က မျက်နှာ နဲ့ အခု မျက်နှာ ယှဉ်ကြည့်ပါ ကျွန်မ ဘယ်လောက်စိတ်ဆင်းရဲးနေတယ်ဆိုတာ ရှင်တို့ မြင်နိုင်ပါစေ ကိုယ်ချင်းစာတရား လဲ ထားနိုင်ကြပါစေ
(Ps.ကျွန်မ bella cushion နဲ့မတည်လို ဖြစ်လာ တာပါ စစ သုံး ချင်း ၂ ပက် အဆီဖု တွေ ဖြစ်နဖူး မှာ ဖြစ်လာတာ ကိုယ်ကျန်းမာရေ ကြောင့် ဆိုပီးဆက်လိမ်းခဲ့ လို ဒီလိုတွေဖြစ် လာတာ ပါ ပိုးဆိုး လာတော့ ကြံရာမရ အတွေ့ အကြူံ ကမရှိတော့ ဘာလုပ် ရမှန်း မသိ တော့ အမေ ကစိတ်ပူပီ အိမ်းနာက အထွေထွေ ရောဂါကုဆရာဝန်စီမှာ ဆေးခန်းပြပါတယ် ။
ဆေးတွေသောက်ဆေးတွေ လိမ်း ပီး ၂ ပက် ကျော်လောက်ထ်ိမပြောက်သေးဘဲ ထက်ထက် ဖြစ်နေလို အရေပြား အထုး ကု ဘယ်မှာကောင်းလဲဆိုပီ စုံးစမ်းဖို့ MBT group မှာ လိုက်ရှာရင် ကိုယ်ဖြစ်နေတာ ထက်မဖြစ် ဖို့ ဂရု စိုက်ကြဖို့ မျကိနှာ နဲ့တစ်ကွတင်လိုက် ချိန်မှာ bella က ညီမ ကို ကုသပေးမယ် ဆိုပီဆက်သွယ် လာပါတယ် ညီမလဲ ကိုယ်မျက်နှာနဂိုအ တိုင်း ပြန်ရရင် ကျေနပ်ပါပီ ဆိုပီ လက်ခံခဲ့ ပါတယ် ညီမတငိထားတဲ့ ပိုစ့်တွေလဲ ဖြတိပေး သူများ တင်ထား တာလဲ ဖြတ်ေ ပးပါလို တောငိဆိုတော့ ထက်တင်တဲ့အမတွေကို ညီမ ဖြတ်ခိုင်းခဲ့ ပါတယ် ။
ပီးတော 1ပက် အကြာမှာ bella ဆက်သွယ်လာပီး အရေပြားအထု ကုDr စမ်းရေးအေးနဲ ၄ ပက်တိတိ ပြပေး ခဲ့ပါတယ် ထင်သလောက်သိပ်မသက်သာ တော့ စိတ်တွေညစ်ခဲ့ ရတယိ dr ကလဲ ပြောပါတယိ သမီး ဒါဖြစ်တာ အချိန်ယူ စိတ်ရှည် ရတယ် လို ဒါမဲ့ ကိုက ဖြစ်ဗနတဲ့ သူဆိုတော့မြန်မြန်ပျောက်ချင်တာ ပေါ့ နော် ဒါမဲ့ ဘယ်တက်နိုင်မလဲ ကြိတ်မှိတ်ရတာပေါ့ နော်
နောက် တစ်ပက် ဆေးခန်း ရက်ချိန်း နေမှာ bella ကအမ ကို ညီမ သိပ်မသက်သာသေး ဘူး ဆေးခန်း မနက်ဖြန် ရ်ှတ ယ် လိုပြောတာ အဲ့အမ က ကစ္စည်းအသစ်တွေ ထွက်မှာ မို့ မအားလို လူလွတ်လိုက်မယ် ပီးတော့ ထင်သလောက် မသ က်သာတော ဆရာဝန်းပြောင်းဖို့ ပြောရင် မဆက်သွယ် လာတော့ ပါဘူး..။
Bella ကိုဒီလောက်အထိ လုပ်ပေးတာ ကိုဘဲ အာနာလှပါပီ ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ် ဒီလောက်တာ ဝန်ယူပေး လ်ို ကျန် တာ မဆက်သွယ် လာတာတော့ အပြစ်မပြောတော့ ပါဘူး ) အခုအိမ်နား က အထုးကုမှာဘဲ ဆေးသောက်ဆေးစား ပြန်လုပ်ပီးကုနေပါတယ်
(စာရှည်သွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ) မေးကြလ်ို တင်လိုက်တာပါ ကိုယ်ချင်မစာ ဝိုင်းလက်ညိုးထားတဲ့ သူတွေကိုလဲ ပြောချင်လို တင်လိုက်ပါပါ
Credit to Myat Won